American Psycho (2000) | MM Movie Store
အမရေိကနျ ပွညျထောငျစု ၉၀နှဈဝနျးကငျြမှာ ကုမ်ပဏီ လူကွီးမငျးတှကွေားက အခငျြးခငျြးပွိုငျဆိုငျမှုတှေ မနာလိုမှုတှေ အဆငျ့အတနျးခှဲ ခွားမှုတှပွေညျ့နှကျနခေဲ့တယျ ….
ရယျမောစကားပွောနပေမေယျ့ အတှငျးစိတျက မုနျးတီးနကွေတဲ့ ပတျဝနျးကငျြတဈခု….ဒီလိုအနအေထားမှာ ပကျထရဈ ဘိတျမနျး တဈယောကျ သူကွညျ့မရတဲ့ လုပျဖျောကိုငျဘကျကို သတျပဈခဲ့တယျ ..သူ့လုပျရပျတှကေ အကုနျအဆနျးတှကွေီးပဲ…ဒီကားဟာ TOP IMDB ထဲမှာပါသလို ရုပျရှငျဝဖေနျရေးသမားတှအေသိအမှတျပွုဇာတျကားတဈကားဖွဈတယျ….
ဒီကားကိုကွညျ့တဲ့သူတှအေဖို့ ဘိတျမနျးရဲ့ စရိုကျ အမူအကငျြ့တှေ ပတျဝနျးကငျြကို ဆကျဆံပုံတှေ အသေးစိတျ မကျြခွမေပွတျလိုကျရပါ့မယျ..….သူလုပျရပျတှဟော အမှနျတကယျဖွဈခဲ့တာလား…စိတျကူးယဉျသကျသကျလား….သူစီစဉျခဲ့တာတှဟောဘာအတှကျလဲ…. ဘာကွောငျ့လဲ…ဒီကားက အတျောကို ခေါငျးစားပါတယျ…
နောကျပွီးအဖျောအခြှတျအခနျးတဈခြို့ ပါလို့ မိသားစုနဲ့အတူမကွညျ့သငျ့ပါဘူး..ဒီကားရဲ့ အဓိကသရုပျဆောငျ Christian Bale ကိုတော့ ထှထှေထေူးထူးမိတျဆကျပေးစရာမလိုဘူးထငျပါတယျ…ဒီကားဟာ ကြှနျတေျာ့အမွငျပွောရရငျ ကွညျ့ရှူသူကို အဖွတှေရှောခိုငျးတာ ဒါမှမဟုတျ ခံစားဆုံးဖွတျနိုငျစှမျးဘယျလောကျရှိသလဲ စမျးသပျနတောနဲ့ပိုတူပါတယျ…
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ၉၀နှစ်ဝန်းကျင်မှာ ကုမ္ပဏီ လူကြီးမင်းတွေကြားက အချင်းချင်းပြိုင်ဆိုင်မှုတွေ မနာလိုမှုတွေ အဆင့်အတန်းခွဲ ခြားမှုတွေပြည့်နှက်နေခဲ့တယ် ….
ရယ်မောစကားပြောနေပေမယ့် အတွင်းစိတ်က မုန်းတီးနေကြတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခု….ဒီလိုအနေအထားမှာ ပက်ထရစ် ဘိတ်မန်း တစ်ယောက် သူကြည့်မရတဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်ကို သတ်ပစ်ခဲ့တယ် ..သူ့လုပ်ရပ်တွေက အကုန်အဆန်းတွေကြီးပဲ…ဒီကားဟာ TOP IMDB ထဲမှာပါသလို ရုပ်ရှင်ဝေဖန်ရေးသမားတွေအသိအမှတ်ပြုဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်တယ်….
ဒီကားကိုကြည့်တဲ့သူတွေအဖို့ ဘိတ်မန်းရဲ့ စရိုက် အမူအကျင့်တွေ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဆက်ဆံပုံတွေ အသေးစိတ် မျက်ခြေမပြတ်လိုက်ရပါ့မယ်..….သူလုပ်ရပ်တွေဟာ အမှန်တကယ်ဖြစ်ခဲ့တာလား…စိတ်ကူးယဉ်သက်သက်လား….သူစီစဉ်ခဲ့တာတွေဟာဘာအတွက်လဲ…. ဘာကြောင့်လဲ…ဒီကားက အတော်ကို ခေါင်းစားပါတယ်…
နောက်ပြီးအဖော်အချွတ်အခန်းတစ်ချို့ ပါလို့ မိသားစုနဲ့အတူမကြည့်သင့်ပါဘူး..ဒီကားရဲ့ အဓိကသရုပ်ဆောင် Christian Bale ကိုတော့ ထွေထွေထူးထူးမိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုဘူးထင်ပါတယ်…ဒီကားဟာ ကျွန်တော့်အမြင်ပြောရရင် ကြည့်ရှူသူကို အဖြေတွေရှာခိုင်းတာ ဒါမှမဟုတ် ခံစားဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းဘယ်လောက်ရှိသလဲ စမ်းသပ်နေတာနဲ့ပိုတူပါတယ်…